Iilali njengamashishini evula indlela eya kwiindawo zaseCaribbean
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Caribbean » Iilali njengamashishini evula indlela eya kwiindawo zaseCaribbean
Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
IJamaica ibizwe njengeKhaya LOKHENKETHO LOLUNTU liZiko laMazwe ngaMazwe loXolo ngezoKhenketho (i-IIPT) njengoko kulapho yaqala khona ubuvulindlela kwiminyaka engama-45 eyadlulayo ngu-Diana McIntyre-Pike umnini / umqhubi we-The Astra Country Inn Mandeville emva koko no-Desmond Henry ongasekhoyo , uMlawuli wezoKhenketho odlulileyo. Ngokudibeneyo benze i-Countrystyle Community Network Network (CCTN) yokuphuhlisa ukhenketho loluntu ikakhulu kunxweme olusemazantsi eJamaica.
Uthungelwano loKhenketho loLuntu lwase-Countrystyle lufumene ukwamkelwa kwasekhaya nakwamanye amazwe.
UDiana McIntyre-Pike ufumene amabhaso aliqela ngeli nyathelo.
Inkqubo yeeDolophana njengamashishini (i-VAB) iphumeze uqeqesho lweentsuku ezintlanu loQeqesho kuShishino kwiindawo zoluntu eJamaica nakwingingqi yeCaribbean.
Kwiminyaka yakutshanje, i-CCTN iphuhlise umbutho wobulungu ongajonganga nzuzo obizwa ngokuba ziiVILLAGES AS BUSINESSES (VAB) efumene ukwamkelwa kwasekhaya nakwamanye amazwe. I-Countrystyle Community Network yenethiwekhi lilungu le- Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi (WTN), Kwaye u-Diana McIntyre-Pike ufumene amabhaso aliqela ngeli nyathelo, elona langoku likwi-2020 ukusuka kwi-WTN esandula ukusekwa njengomnye wabaqeqeshi bezoKhenketho abali-17 abaza kunikwa ilizwe jikelele Ibhaso lamagorha ezoKhenkethoInkqubo yodumo.
Inkqubo yeeDolophana njengamashishini (i-VAB) iphumeze uqeqesho lweentsuku ezintlanu loQeqesho kuShishino kwiindawo zokuhlala eJamaica nase ummandla weCaribbean ngoku eqinisekisiweyo yiYunivesithi yaseWest Indies (UWI) yeKhampasi evulekileyo. Uqeqesho lubandakanya ukukhula komntu, uphando ngezinto ezikhoyo kunye nezinto ezinokubakho, ulwazi malunga nokusingqongileyo, ukhenketho kunye nokukhethwa kwemveliso, uphuhliso lweshishini, ukhuseleko kunye neenkqubo ze COVID. Omnye wemibutho yaseJamaican Diaspora, esenza iiNxibelelwano zisebenze e-UK, ixhase i-VAB kunye nentengiso YOKHENKETHO LOLUNTU njenge-ambrela.
Emva kwexesha uDesmond Henry
I-Networkstyle Community Network Network (i-CCTN) kutsha nje ithathe isigqibo sokuba ne-Jamaican kunye neCaribbean Diaspora njengotyalo-mali kunye namaqabane ayo okuthengisa. Idale ingxowa-mali ekhethekileyo yezokhenketho yoluntu ebizwa ngokuba yi-COMFUND kunye neBhodi yeDiaspora yexeshana. I-COMFUND ngoku ibhalisiwe eMelika kwaye ngoku iyagqitywa kunye neziko lezemali ukuququzelela iminikelo kunye notyalo-mali olunokubakho. Inzala kwi-COMFUND iyakuxhasa inzala yemali mboleko ephantsi kwaye ibonelele ngenkxaso-mali yokufumana iiprojekthi zophuhliso loluntu ezizinzileyo ezingeniswe ngamalungu eeLali njengamashishini. Zonke iiholide zeNdlela yokuPhila yoLuntu kwiCCTN kunye noKhenketho ziya kubandakanya igalelo kwi-COMFUND.
Ubambiswano sele lugqityiwe kunye neqonga leCaribbean Diaspora yesicelo seqonga elibizwa ngokuba yiTravelJamii eliza kuqaliswa ngoSeptemba 2021. I-TravelJamii App iyakwenza ukuba uLuntu lweHlabathi lukwazi ukuva yonke into yaseCaribbean, ngokukhuthaza ukhenketho, ukhenketho loluntu, iimveliso eziphambili, amashishini endawo , umdla, iminyhadala, ukutya, imbali, indalo, iindaba kunye nokunye.
UGqirha Samuel Lee Hancock, CM uthi:
NgoSeptemba 2, 2021 kwi-20: 58
Mva kwemini evela eWashington, DC Diana! Yeyiphi eyona ndawo intle kakhulu yeCaribbean kunye nehlabathi liphela "Iilali Njengamashishini" njengenxalenye ye-Countrystyle Community Tourism Network (CCTN). Yakho intshukumo enamandla eJamaica nakwilizwe lonke le-34, imimandla, kunye nokuxhomekeka kweCaribbean. Kukuphi ukufikelela kwilizwe ngokubanzi kunye nokugubungela iqonga lakho lophuhliso olwahlukileyo kunye noluntu.
Lixesha lokuba sixoxe ngokuBambisana kwamazwe ngamazwe ngeYachting Fellowship yeRotarians (IYFR) yeCaribbean kunye neLatin American izindululo zokugubungela lonke ulwandle lweCaribbean kwi-EmeraldPlanet TV. Ezi ziyakuba zezosasazo mihla le apha ekhaya nakwamanye amazwe. Uhlobo lwakho loluntu kukhenketho kunye nokhenketho kwezolimo luzisa ngokwenyani unxibelelwano, ukuqonda, urhwebo, ukuxhotyiswa kwabasetyhini kunye noluntu, kunye noxolo kwiCaribbean nakwihlabathi liphela.
Ukwabelana apha ngeNkqubo yakho yeTV, iMiboniso, kunye nePodcast yemibutho yakho ebalaseleyo…
(Ukuba i-URL ayixhunywanga khuphela nje kunye nokudlulileyo kwisikhangeli sakho sewebhu. Yonwabele uhambo lwakho!)
Isihloko: "Ubunkokeli babafazi obuTshintsha uLuntu ngokuFundisa ngoShishino kunye noFama oluGcinekayo"
I-EmeraldPlanet International Foundation © Inkqubo ye-YouTube URL:
Bonisa '1' Umxholo: "Ukuhlahla indlela eya phambili kuKhenketho loLuntu lwaseJamaica naseCaribbean" https://www.youtube.com/watch?v=hHfPMvROzuw
Bonisa '2' Umxholo: "Abafazi Abakhokelayo & Noqeqesho Lokushishina Kwishishini Lasekuhlaleni Lokhenketho" https://www.youtube.com/watch?v=GmBh80ZLTXY
Bonisa umxholo we-3 https://www.youtube.com/watch?v=vXxYeYdh5bI
Bonisa '4' Umxholo: “Ukuhlonipha iTekhnoloji yeMveli kunye neNdlela yokuphila”
"Ubunkokeli babafazi abaguqula uluntu ngokufunda ngemfundo kunye nolimo oluzinzileyo" ipodcast: https://open.spotify.com/episode/3AV2XKvJiNzAzN4o6cBUf8?si=fyq35DBOThmwI7P1M0XFbg&nd=1
Iminqweno emihle kakhulu kuDiana ngale ndaba imnandi kangaka kunye nezinye ezininzi eziza kwenziwa kwikamva malunga "neelali zakho njengamashishini" njengenxalenye ye-Countrystyle Community Tourism Network (CCTN) njengoko sisonke senza i-EmeraldPlanet ©.